1 को रूसी साइकल चलाउने भाग को इतिहास - Triskirun
रूसी साइकल चलाउने भाग 1 को इतिहास
व्लादिमीर ग्रिसेचोक 15.09.2016, 09: 18 823 कुनै टिप्पणीहरू छैनन्
रूसको पहिलो साइकल 60 को शुरुमा देखा पर्यो‑उ XIX सदियों (बेशक, हामी कारहरुको मतलब छ कि एक आधुनिक साइकल को मूल डिजाइन सुविधाहरु थियो - पैडल ड्राइव, एक रोटरी व्हील, स्टीयरिंग व्हील संग जुडे, चाल मा दिशा को एक परिवर्तन प्रदान)। तीमध्ये धेरै आयात गरिएको थियो‑विदेशमा, तर त्यहाँ मशीनहरू र घरेलु टुक्रा उत्पादनहरू थिए, विदेशी मोडेलहरू दुवै बनाइए, र हाम्रा साथीहरूद्वारा आविष्कार गरे। यहाँ केही तथ्याङ्कहरू छन् जुन रूसको विस्तारमा साइकल फैलिएको इतिहाससँग सम्बन्धित छन्।
सेन्ट पीटर्सबर्गमा, पहिलो साइकल 1860-ies को बीचमा देखा पर्दछ। तिनीहरू राजधानीका अरिस्टोक्रेट्स द्वारा फ्रान्सबाट ल्याइएका थिए। यी साइकलमध्ये एक, पेरिस फर्म अर्नस्ट मिकक्स द्वारा 1867 को वरिपरि उत्पादन गरिएको छ, हाम्रो समयमा पुरा तरिकाले संरक्षित छ र पेट्रोफो संग्रहालय-रिजर्वमा प्रदर्शन गरिएको छ। यो कार, किंवदंती अनुसार, सम्राट अलेक्जेंडर द्वितीय हो।
मास्कोमा, साइकलहरू पहिलोपटक 1860-iesको सुरुमा देखिएका थिए। तिनीहरू केही रिपोर्टहरू अनुसार, "काोस्टोट्रीसिसी" - फेरि फ्रान्सेली मूलको। तथापि, यो सुदृढ रुपमा जानिन्छ कि विदेशी साइकल चाँडै देखा पर्यो, र घरेलु, यद्यपि कारखाना छैन, र भित्ता फोहर। सामान्य शब्दहरु मा दोहोरो फ्रान्सेली प्रोटोटाइपहरू, तिनीहरूसँग मात्र तिनीहरूका विशिष्ट विशेषताहरू थिए, जसले यसले संकेत गर्दछ कि रूसमा शिल्पकारहरूले "साइकल आविष्कार" पनि गरे।
1868 मा, पहिलो साइकल येनेटरिनबर्ग मा प्रकाशित भएको थियो, यूआर रोउट्नर, यूरल पौडी को मुख्य प्रेमी को पुत्र। यो दुई पहिया र काठको बनाइएको थियो।
वोरोनज मा, बाइक 1869 वर्ष मा "बिरोध" मा साइकिल। तिनको काठ, फलाम-बाहिरी पाङ्ग्राहरू थिए, र अगाडी अगाडी बढ्यो। उहाँ विदेशबाट ल्याइएको थियो वीजी स्टोल - ठूलो फाउंड्री-यांत्रिक संयन्त्रको मालिक।
कजान मा पहिलो बाइक बाइक सर्कस कलाकार Leonce, जो शहर पार्क मा प्रस्तुति को समयमा दिनुभयो को छविमा हाम्रो आफ्नै कार्यशाला मा, 1878 बनेको थियो मिस्त्री हेनरी Bogdanovic Mamiel। साइकल ग्याँस पाइपबाट बनाइयो र लामो समयको लागि ब्रेकडाउन बिना सेवा गरिरहेको थियो। कार, ​​एक क्लासिक "kostotryas" जस्तो यसको पाङ्ग्रा रबर आयताकार प्रोफाइल ढाकिएको थियो। उहाँले2प्याड 10 पाउन्ड (36 किलोग्राम) पाउनुभयो।
कजानको पहिलो विदेशी साइकल त्यही 1878 वर्षमा ल्याइएको थियो।
XXXXXXX को अन्त मा एक कुर्सिक वाइन व्यापारिहरु ले फ्रान्स देखि एक काठ को साइकल प्राप्त गरे र यसलाई एक विशेष रूप देखि निर्मित काठ को पथ मा चढाइयो।
ओडेसा मा, वर्ष 1878 ज्ञात व्यापारी र अवैतनिक खेल एडल्फ Zorn, ठूलो खेलाडीहरूलाई, cyclists को एक परिवार को पिता को वसन्त मा भर्खरै विदेश बाइक प्रकार "माकुरा" बाट ल्याए आफ्नो मूल शहर सडकमा गर्न, भयो। उनको भ्रमणले शहरको जनसंख्याको बीचमा धेरै चासो बढ्यो।
साइबेरियामा, पहिलो साइकल 1863 वा 1864 वर्षमा देखा पर्दछ। व्यापारीले राफेलोभ, तीन-चक्करिएको काठको साइकल मालिक खाबरोवोकोभमा बस्यो।
रूसमा साइकिलको विस्तारको साथ, आन्दोलनको नयाँ मोडको एडपर्ट बढ्यो। धेरै समाजले साइकल यात्रीहरू (विशेषतया ग्रामीण आबादीको बारेमा, जो अक्सर शिक्षाको कमीको लागि अज्ञानता लिन लागेका थिए) बाट सावधान हुन्थ्यो, उनीहरुले केही गर्न चाहन्थे तर एकजुट गरेनन्। यो बुझ्न सकिन्छ कि सबैभन्दा ठूला साइकल यात्रीहरू ठूला ठूला ठूला ठूला ठूला ठूला ठूलाहरू छन्। किनकि ती वर्षहरूमा साइकल 300 - 400 रुबलको बारेमा खर्च भयो, यो केवल आर्यवाद, उद्योगपति र धनी व्यापारीहरूको लागि मात्र उपलब्ध थियो। हो, र एक सुरक्षित सवारी "साइकल" चाँडै थिएन, खतरनाक खेलकुद उपकरण बाँचिरहेको बेलामा सवारी चालक धेरै खतरनाक थियो। यसबाहेक, पहिले नै 1880 मा सेन्ट पीटर्सबर्गमा पचास चक्रवातकर्ताहरूको बारेमा दर्ता गरिएको छ।
रूसमा पहिलो साइकल समाज सङ्गर्स सलोडो, सबैभन्दा ठूलो महानगरीय अभिजात वर्गको घेरामा आयोजित गरिएको थियो।4मार्च 1883 द्वारा "साइकल यात्रीहरूको Tsarskoy-ग्रामीण मग" को चार्ट अनुमोदित गरियो। 70-ies को अन्त मा सेन्ट पीटर्सबर्ग मा, साइकल प्रेमी को एक समूह को गठन भएको थियो, जो एन्ट्रियल साइक्लिस्ट्स को सेन्ट पीटर्सबर्ग सोसायटी को चार्ट विकसित गर्यो। एक्सएनएक्सएनएक्सपीक्स वर्षमा स्वीकृतिको लागि चार्टर सेंट सेन्ट पीटर्सबर्ग सिटी गवर्नरमा पेश गरिएको थियो, तर विभिन्न कारणका कारण उनी धेरै पटक परिष्कृत भएका थिए। कम्पनीको चार्टर मात्र 1880 डिसेम्बर5वर्ष अनुमोदन गरिएको थियो।
Muscovites राजधानी बाहिर हटाइयो - मस्को सोसायटी को चार्टर सोसायटी साइक्स्टर्स को 31 मार्च 1884 को मंजूरी दी। निगमको आयोजनकर्ता र चार्टरको लेखक यूलिया इवानोभिच ब्लक, एक प्रसिद्ध मास्को खेलाडी थियो। "नवजात" समाजको अध्यक्ष पीटर कुज्मिच पोर्यिनेनिकोभ थियो। वर्षको अन्त सम्म, मस्को समाजले पहिले नै 52 पूर्ण सदस्यहरू भएको थियो।
निगमहरूले सार्वजनिक यात्राहरू (कहिलेकाहीँ निकै लामो दूरीसम्म), क्लब कोइरालाले साइकल द्वारा शहर वरपर ड्राइभिङ्ग गर्न अनुमति प्राप्त गर्न सुविधा प्रदान गर्दछ। सुरक्षित रूपमा शहरहरूको सडकमा सवारी गर्न, चक्रवातलाई सवारी प्राधिकृत प्रमाणपत्रको आवश्यकता थियो, र एक इजाजतपत्र प्लेट, बस "टिन" भनिन्छ। लाइसेन्स प्लेट एउटा साइकल परीक्षा पछि साइकल चलाउन र कर भुक्तानी गर्ने क्षमतामा जारी गरियो। र "टिन डिब्बा" एक वर्षको लागि सञ्चालन गरियो, र नयाँ सिजनको सुरुवातमा प्रमाणपत्र र अंक प्राप्त गर्ने प्रक्रिया दोहोर्याइएको थियो। कोठाको शहरको "तातोपानी" को निर्धारण गर्न, यस वर्षको बाहेक बाहिरबाट निस्किएको थियो, पछिल्लो सिजनको ट्याब्लेट हरेक समय फरक रंगमा चित्रित गरियो। विवादास्पद प्रहरी अधिकारीहरूले पक्रेका थिए, प्रहरी स्टेशन फर्केर गए र निर्दोष रूपमा सजाय गरे। यसलाई थप्न सकिन्छ कि 1870 - 80 वर्षमा रूसी साम्राज्यका सबै शहरहरूमा सहरमा सहरमा सवार सहरमा निषेध गरिएको थियो। यस कारणको लागि, पहिलो घरेलू साइकलिस्टहरू मात्र संलग्न संलग्न परिसर वा शहरको सीमा बाहिर बाहिर सवारी गर्ने मौका थियो।
अनि केवल धेरै मागहरू र राजधानीका प्रशासनिक क्षेत्रका साथ दुर्भाग्यवश "चक्रवात" को लामो अनुरोध पछि, 1892 को गर्मी मा एक सर्कुलर सेन्ट सेन्ट पीटर्सबर्ग वरपर घुमाउने साइकललाई जारी गरियो। तथापि, यो निर्णय सड़कों को एक विस्तृत सूची संग भएको थियो जसको लागी एक साइकिल मा साइकिल को ठीक देखि निवारण को तहत मनाइयो। राजधानी पछि, साइकल चलाउन रूसका सबै शहरहरूमा अनुमति दिइएको थियो।
समाजका सदस्यहरू बीचमा खेलाडीहरू थिए जसले विभिन्न खेलकुदहरूमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू छन्। यो एकदम स्वाभाविक छ कि प्रश्न: "सर्वश्रेष्ठ साइकल सवार को हो?" तिनीहरूलाई शान्ति दिन सकेको थिएन, पहिलो साइकल प्रतियोगिताको संगठनमा प्रभावकारी रूपमा सेवा गर्दै।
रूसमा पहिलो बाइक दौड Khodynka Hippodrome मा मास्को मा 24 जुलाई 1883 आयोजित गरियो। को प्रतियोगिताहरु एक दूरी मा आयोजित थियो - 1,5 माइल, तर दर्शक को रेकर्ड संख्या संकलित - 25 000 बारेमा। खेलकुद तिहार को सहभागीहरू बारेमा जानकारी धेरै stingy छ, तर इतिहास तिनीहरूलाई केही नाम सुरक्षित राख्नुभएको छ: Kharkov देखि Muscovites भाइहरूलाई हेनरी र Fyodor Zhemlichki, जुलियस र लुडविग ब्लक, पूंजी architect Vasily Agatonovich Prussians, वोरोनिश विल्हेम Germanovich त्यसैले मा आरन-यांत्रिक बोट को मालिक, अलेक्जेन्डर Andrianov र उत्तरी अमेरिका को एक नागरिक, व्यवसायी II लेजर। तिनीहरूले धेरै ब्रिटिश नागरिकहरु भाग लिए एक अष्ट्रीया (शायद मन जी Zhemlichka मा थियो - - उहाँले अष्ट्रीया राष्ट्रियता थियो) प्रतियोगिताहरु अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति योग्य थिए - पहिले नै उल्लेख आई lers र अमेरिकी। सबै खेलाडीहरू उच्च साइकल चलाए, "मकवानकहरू"। जित्यो Muscovite Zhemlichka Fedor, उहाँले को मानार्थ शीर्षक पहिलो होल्डर भयो "रूस को सर्वश्रेष्ठ सवार।"
लेजर I. पहिलो रूसी साइकल चलाउन दौड 24 जुलाई 1883 को सहभागी।
निम्न प्रतियोगिताहरु को महारानी Meadow मा सेन्ट पीटर्सबर्ग (मंगल क्षेत्र) र 23 30 सेप्टेम्बर 1884 वर्ष पुरानो र साइकलको वर्ण छुट्टी द्वारा पहिले नै थकित मा आयोजित थियो। पहिलो दिन त्यहाँ विभिन्न दूरीमा पाँच प्रकारको प्रतियोगिताहरू थिए। सुरुमा दुई दर्जन चक्रवातहरू मस्को, सेन्ट पीटर्सबर्ग, बोलोगोलो र ह्याम्बर्गबाट ​​एक मकवानमा आइपुगे। Tsaritsyn माछा मा 60 000 दर्शकहरु भन्दा अधिक आयो - धेरै मानिसहरूले सेनाको उच्चतम समीक्षाहरू पनि सङ्कलन गरेनन्! आरेखित लागि 1,5-verst दौड मा सेन्ट पीटर्सबर्ग ए Igumnov देखि अवैतनिक cyclists को संस्थापक को एक (यो Muscovite ई Mansurov संग "पाङ्ग्रा गर्न पाङ्ग्रा" आए किनभने) जित्यो। उहाँ दोस्रो सबै-रूसी चैंपियन बन्नुभयो। दौड पनि दूरी 7,5 मा प्रदर्शन र 15 दुई-wheeled वाहन र 1,5 र3माइल लागि किलोमिटर - trehkolesok लागि। सबैभन्दा कठिन थियो 15-सत्ययोग्य दौड। यो चौध मान्छे उपस्थित थियो, तर समाप्त अघि मात्र दुई आए: पहिलो - Goli, दोस्रो - Igumnov, र, त्यसबेलाको थियो, Goli पछि धेरै महिना बिरामी विजेता।
प्रतियोगिताको दोस्रो दिन सहभागिताका लागि मौसम अनुकूल थिएन: यो वर्षा हुँदै गयो र दर्शकहरूले केवल 5-6 हजार प्राप्त गरे। त्यसपछि, रूसमा पहिलो पटक, एक्सएनएमएक्स विरुद्धको दूरीको लागि टाँन्डेम (दुई-सिट साइकल कारहरू) को लागि एक रेस का आयोजन गरिएको थियो। टेन्डेमहरू सुधारिएको थियो - दुई साधारण "स्पाइडरहरू" ले पछि पर्दा हटाइयो, साना पाङ्ग्राहरू, र एक विशेष गर्दनसँग जोडिएको अगाडि। त्यस्ता मिसिनहरूमा प्रतिस्पर्धा अत्यन्तै खतरनाक छ - सवारहरूको सहि निरीक्षण मानव विकासको उचाईबाट घट्यो। यस तथ्यले गर्दा खतरा बढ्यो कि मस्कोबाट मात्र दौडको पूर्वमा प्राप्त भएका जोडीहरु, र एथलीटहरूले यस डिजाइनलाई अनुकूलन गर्ने मौका थिएन।
दौड चार मा शामिल छ: एगमुमोरोभ मार्ककोव संग र रोडे - एवरीानोव संग। टाढा टाढा र एरानोनभ दोस्रो चरणको सुरुमा पराजित भएमात्र दूरीको पहिलो टण्डम समाप्त भयो।
मई 1897 वर्ष, पीटरबर्ग, काममेनोस्रोवस्की ट्रयाक। दौडको सुरुवात तीन पद हो। दायाँ मा - वी। वी। मुरमान (जेव्वेदकिङ्क)। तेस्रोबाट दायाँ - डी। मार्शलभ। टाढाको बायाँ VA मार्कोभ, रूस 1896 को चैंपियन हो।
Utochkin Sergey। रूसको दोहोरिएको चैंपियन, रेकर्ड धारक। केयरले 1894 वर्षको अन्त्यमा काम सुरु गर्यो। 29 जून 1897 ले पल बर्लिनको स्वामित्वमा 1 /3माइलका लागि संसारको रेकर्ड तोडे।
जारी राख्न ...
अघिल्लो लेख स्कियर-रेकरहरूको विकासशील प्रशिक्षणमा, स्की-रोलर्सहरूसँग तुलनामा दौडिएको एक फायदा छ
अर्को लेख मस्को 10 सेप्टेम्बर मा सिटी डे मा उन्मूलन को लागि एक दौड थियो
1735कुनै टिप्पणीहरू छैनन्
स्कियर-रेकरहरूको विकासशील प्रशिक्षणमा, स्की-रोलर्सहरूसँग तुलनामा दौडिएको एक फायदा छ
मस्को 10 सेप्टेम्बर मा सिटी डे मा उन्मूलन को लागि एक दौड थियो